Nogaomain’ny Thailandey mpanonta pirinty ny lahatsoratra amin’ny fonon-gazety International New York Times · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Desambra 2015 18:06 GMT
(Havia) ny gazety International New York Times nivoaka araka ny tokony ho izy tamin'ny 1 desambra 2015. (Havanana) Io gazety io ihany namidy tany Thailandy. Sary sy pikantsary avy amin'ny Prachatai.
Lahatsoratra nasaim-panovana avy amin'ny Prachatai, tahalam-baovao mahaleotena iray ao Thailandy sy navoaka eto amin'ny Global Voices ity indray ho ao anatin'ny fifanarahana fifampizaram-botoaty
Nisy orinasam-pamoaham-baovao Thailandey iray nanaisotra avy tamin'ny pejy voalohany ny lahatsoratry ny International New York Times, lahatsoratra iray miresaka amin'ny endrika matroka ny toekarena Thailandey nandritra ny fitondrana miaramila.
Navelatry ny kiôska mpivaro-gazety tao Thailandy teny amin'ny talantalany ny gazety tamin'ny 1 Desambra 2015 tsy ahitana ny lahatsoratra teo afovoan'ny pejy voalohany.
Nasolo ny lohateny sy ny lahatsoratra ny zoro foana miaty ny hafatra tsotra manao hoe:
Nesorin'ny mpanota pirinty teto Thailandy ny lahatsoratra teto amin'ity toerana ity. Tsy misy idiran'ny International New York Times sy ny ekipam-panoratana ao aminy ny fanesorana azy.
Ny nanapahan'ny Thailandey mpanonta pirinty hoesorina dia ny lahatsoratra farany indrindra nosoratan'i Thomas Fuller mitondra ny lohateny hoe ‘Ny fanahy Thailandey mitolefika ao anaty toekarena’.
Nosoratan'i Fuller fa tamin'ity taona 2015 ity dia niakatra mihoatra ny 60 isanjato ny tahan'ny famonoan'olona tao Thailandy ary tsy narisika loatra ny fitozoana tao amin'ny toekarenan'ny Firenena faharoa lehibe indrindra ao Azia Atsimo atsinanana nandritra ny fotoana lava nisian'ny savorovoro politika tao amin'ny firenena sy ny fitondrana miaramila tarihin'ny Jeneraly Prayut Chan-o-cha, mpitarika ny fitondrana jadona miaramila, nanatontosa ny fanonganam-panjakana tamin'ny volana mey tamin'ny herintaona.
Zoro fotsy amin'ny fonom-pejin'ny NYT ao Thailandy: Nesorin'ny mpanonta pirinty tao an-toerana ity lahatsoratra ity
Ny International The New York Times tao Thailandy androany
Tsy ho hitanao ao amin'ny edisiona Thailandey ity lahatsoratra ity > MItolefika ny toekarena sy ny fanahy Thailandey
Tamin'ny Septambra 2015 ity mpanonta pirinty ity ihany no nandà tsy hamoaka ny International New York Times nivoaka tamin'ny 22 septambra ahitana ny lahatsoratra nosoratan'ity mpanoratra ity ihany, tamin'ny filazana fa “saropady loatra” na ny lohateny na ny sary ahitana ireo mpiakanjo mavo mpanohana ny fitondrana mitondra ny sarintavan'ny mpanjaka.
Miresaka ny toe-pahasalaman'ny Mpanjaka Bhumibol, izay ho 88 taona amin'ity andron'ny 5 Desambra 2015 ity ny lahatsoratra, sy ny hoavin'ny fitondram-panjaka tokana Thailandey.
Fotoana fohy taorian'ity toe-draharaha ity dia nanambara ny New York Times fa tsy hivoaka any Thailandy intsony amin'ny 2016.
Tamin'ny herintaona ny manampahefana Thailandey nanakana ny tranonkalan'i Daily Mail, gazety mpanaitaitra miorina ao amin'ny Fanjakana Mitambatra, noho ny lahatsoratra miresaka ny satro-boninahitry ny printsin'i Thailandy. Mbola voasakana izany tranonkala izao hatramin'izao.
Voarara tanteraka ireo lahatsoratra mitsikera ny fitondram-panjaka tokana Thailandey ao amin'ity firenena ity noho ny Lalàna andininy faha-112 amin'ny ady heloka bevava — lalànan'ny lèse majesté — izay mitondra hatrany amin'ny fanagadrana maharitra 15 taona.
Taorian'ny fanonganam-panjakana dia ny fitsarana miaramila no mitantana ny lalànan'ny lèse majesté, ary tsy misy ny fahafahana mampakatra fitsarana ambony.
Aogositra 2015, namoaka didy hampiditra am-ponja hatramin'ny 30 taona an-tranomaizina ny lehilahy iray voampanga ho nanimba endrika ny fitondram-panjaka Thailandey ao amin'ny media sosialy ny fitsarana miaramila, fitsarana narahina tamin'ny fakandahatsary (tsy nisokatra tamin'ny besinimaro ary tsy azon'ny mpanao gazety nidirana). Io didy io no fanagadrana mavesatra indrindra fantatra hatramin'izay noho ny raharaha “lèse majesté”.
Fanina tanteraka ihany koa ny fahalalahan-gazety ao Thailandy ao anatin'ny fitondrana miaramila, izay manana fahefana hanonona ny Fizarana faha-44 amin'ny Lalampanorenana Vonjimaika, manome fahefana feno ny manampahefana hitazona ny fiarovam-pirenena, hampangina ny mpanao gazety sy hamotika ny fisintahana ara-politika.
Tamin'ny Septambra farany teo ny mpanao gazety iray malaza antsoina hoe Pravit Rojanaphruk no notazonin'ny miaramila tao amin'ny tobin-tafika iray ivelan'i Bangkok noho ny fanehoan-kevitra nataony tao amin'ny Twitter mitsikera ny fitondrana miaramila.